Sida Loo Helo Caawinaad - Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie
Badhankaani "Apply Online" wuxuu kuu jiheyn doonaa bogga internetka ee 'Legal Aid Aid', halkaasoo Prairie State ay ku martigeliso nidaamkeeda qaadashada internetka.
Si aan u gaarno Mashruuca Guriyeynta Caddaaladda, wac (855) FHP-PSLS / (855) 347-7757.
Si aan u gaarno Khadka Rabshadaha Guriga, wac (844) 388-7757. Saacadaha Khadka Caawinta: 9AM - 1PM (M, T,T) iyo 6PM - 8PM (W)
Si aan u gaarno Caawinta Sharciga ee Mulkiilayaasha Guryaha, wac (888) 966-7757. Saacadaha Khadka Caawinta: 9 subaxnimo - 1 galabnimo (M-Th)
Si aan u gaarno Caawinta Sharciga ee Mashruuca Dadka Waaweyn, wac (888) 965-7757. Saacadaha Khadka Caawinta: 9 subaxnimo - 1 galabnimo (M-Th)
Si aan u gaarno Rugta Canshuuraha Dakhliga Hoose, wac (855) TAX-PSLS / (855) 829-7757.
Caawinta ka saarida Illinois waxay siisaa adeegyo iyo agab sharci oo bilaash ah dadka wax ka qabanaya ka saarista. Si aad u hesho Caawinta Eviction Illinois, wac (855) 631-0811; qoraalka ka saarida ilaa 1 (844) 938-4280; ama booqo guri ka saaridhelpillinusines. Saacadaha Khadka Ka saarida: 9 subaxnimo - 4 galabnimo (MF)
Adeegga La-talinta Taleefoonka: 9AM - 1PM (M-Th). Soo wacayaasha markii ugu horreysay waxay adeeggan ku heli karaan iyagoo waca lambarka taleefanka xafiiska deegaanka. Wicitaanada uqalma ama waxay helayaan talosiin deg deg ah ama gudbin.
Xafiisyadeenu guud ahaan waxay furan yihiin 8:30 subaxnimo - 5:00 galabnimo (MF).
Dhamaan barnaamijyada kale, wac xafiiska deegaankaaga.
KU SAABSAN CODSIGA
Dhammaan codsadeyaasha waxaa laga baari doonaa u-qalmitaanka.
Qofka u baahan caawimaad sharci waa inuu dalbadaa haddii uusan isagu ama iyadu sidaas samayn karin da 'ama naafo darteed.
Hayso wax waraaqo maxkamadeed ah ama dukumiintiyo kale oo muhiim ah oo aad heli karto markaad soo wacayso.
Turjubaano ayaa la heli karaa iyada oo aan wax lacag ah laga qaadin markii loo baahdo.
Dhaqaalaha oo yar awgood, ma caawin karno qof walba. Caawinaad dheeri ah, booqo bogga Kheyraadka Dheeraadka ah.
Ma diidi doonno caawimaad ku saleysan jinsiyad, midab, asal qaran, jinsi, nooca galmada, da ', diin, ku xirnaan siyaasadeed ama caqiido, naafonimo ama kala sooc kasta oo kale oo sharcigu ilaaliyo.
DHAQAALAHA U QALMADA
Si aad xaq ugu yeelato caawimaadda Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie waxay kuxirantahay arrimaha soo socda:
Waxaad la kulantaa kuweena tilmaamaha dakhliga iyo hantida. Guud ahaan, macmiilku wuu uqalmaa haddii dakhligiisa ama qoyskeedu kayaryahay 125% heerka saboolnimada federaalka, ama ilaa 200% heerka saboolnimada federaalka haddii reerku leeyahay kharashyo cayiman. Deeqaha qaarkood ayaa noo oggolaanaya inaan u adeegno macaamiisha qaarkood oo leh dakhli sarreeya iyo / ama shuruudaha hantida.
Waxaan leenahay khilaaf danaha ku saabsan arrintaada sharciga ah.
Waxaad ku nool aagga adeeggayaga, ama dhibaato xagga sharciga ah oo xagga madaniga ah ka haysato mid ka mid ah gobollada ku yaal aagga adeeggayaga. Si aad u aragto aaggeenna adeegga, riix halkan.
Waxaad la kulantaa dhalashada ama shuruudaha socdaalka waxaa aasaasey Congress. Dadka ka cararaya rabshadaha guriga ama ka ganacsiga dadka ayaa xaq u leh iyadoon loo eegin xaaladda socdaalka ee arrimaha si wax looga qabto xadgudubka.
Dowladda qawaaniintu ma mamnuucayaan Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie ee wax ka qabashada nooca dhibaatadaada sharci.
Waxaad hal ama in ka badan dhibaatooyinka xagga sharciga ah taas oo ka mid ah waxyaabaha mudnaanta la siiyay.
"Suurtagal maaha in dadka qaar loo hiiliyo oo aan loo hiilin dadka oo dhan." -Martin Luther King Jr.	... Arag in dheeraad ahEeg Khariidad